Dhibaatooyinka nolosha shaqada - InfoFinland
Nolosha Finland > Shaqo iyo ganacsi > Dhibaatooyinka nolosha shaqada
Haddii aad dhibaato ku qabto goobta shaqada, marka hore kala hadal madaxdaada. Waxaa kale oo aad caawimaad ka heli kartaa wakiilka shaqaalaha ee goobta ama ururka shqaalaha. Boggan waxaad ka heleysaa jawaabaha dhibaatooyinka aad kala kulmi karto nolosha shaqada.
Halkeen caawimaad uga helaa dhibaatooyinka nolosha shaqada?
Marka hore kala hadal madaxdaada. Haddii ay waxba caawin weydo, la xiriir wakiilka badbaadada ee goobta shaqada ama qofka loo wakiishay arrimahaas. Haddii aysan goobta shaqadu laheyn qof la wakiishay islamarkaasna aad xubin ka tahay iskaashatada xirfadleyda, la xiriir iskaashatadaada xirfadleyda.
Xiriirka guud ee iskaashatooyinka xirfadleyda Finland SAK waxey si lacag la’aan ah ku bixisaa talo bixinta xiriirka shaqada. Talo-bixinta waad heli kartaa haddii aadan xittaa xubin ka aheyn iskaashatada xirfadleyda. Sharciyaqaanadu waxey su’aalahaada uga jawaabayaan af Finnish iyo Ingiriis. Talo-bixinta waxaad ku heleysaa telefoon iyo emayl:
Tel. 0800 414 004, Isniin saacadaha u dhexeeya 14-17, Talaado iyo Arbaco saacadaha u dhexeeya 9-11 iyo 12-15
Waxaad sidoo kale wici kartaa telefoonka talo-bixinta dalka oo dhan ee hay’adda badbaadada shaqaalaha:
Macluumaadyada xiriirka ee Hay'adda badbaadada shaqaalahaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Mar dhow ayuu dhamaanayaa xiriirkayga shaqadu. Sidee ayeey saameyn ugu yeelan kartaa sharcigayga degenaanshaha?
Xaaladdu waxey ku xiran tahay sharciga degenaanshaha ee aad heysato nooca uu yahay.
Haddii sharcigaaada degenaanshuhu uu quseeyo shaqo-bixiye cayiman oo kaliya, codso sharciga degenaanshaha shaqaalaha oo cusub. Si aad u codsato sharciga degenaanshaha oo cusub waa in aad shaqo cusub heysataa. Sharciga degenaanshaha waxaad sidoo kale ku codsan kartaa sababo kale. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sababaha sharciga degenaanshaha ka aqri qeybta InfoFinlandi Aan aheyn muwaadin EU.
Haddii uu xiriirkaada shaqo dhamaanayo ka hor inta uusan dhicin sharciga degenaanshuhu, qoraal ahaan u ogeysii Hay’adda socdaalka. Shaqo-bixiyahaada ayaa ogeysiiska sameyn kara.
Haddii sharcigada degenaanshaha laguugu siiyay xirfad cayiman darteed, waxaad booska shaqada ku beddelan kartaa isla xirfadda dhexdeeda.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ogolaanshiyaha joogitaanka ee shaqaalaha iyo ganacsadaha waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Shaqo u imaanshaha Finland iyo Ku imaanshaha Finland ganacsade ahaan. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ka codsashada Finland shaqo ka aqri bogga Shaqo ka helista Finland. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codsashada magdhowga shaqo la’aanta waxaad ka heleysaa bogga Gargaarka shaqo la’aanta.
Waxaa aniga la i siiyay mushaar aad u yar. Maxaan sameeyaa?
Ka hubi markasta xisaabta mushaarka in aad heshay mushaar cadadkiisu sax yahay.
Haddii aad heshay mushaar aad u yar, ka codso shaqo-bixiyaha in uu saxo xisaabta mushaarka. Haddii uu shaqo-bixiyuhu ku siin waayo mushaar sax ah, talo weydiiso badbaadada shaqaalaha ee waaxda maamulka gobolka ama iskaashatadaada xirfadleyda.
Haddii aadan shaqo-bixiyahaada kala heshiin karin bixinta mushaarka, arrinta waa in lagu xalliyaa maxkamad. Si kastaba ha ahaatase tani waa xalka ugu dambeeya.
Shaqo-bixiyaheygu wuxuu doonayaa in uu mushaarka caddaan ku bixiyo. Sidaas ma la yeeli karaa?
Shaqo-bixiyuhu waa in uu mushaarka ku soo shubaa akoonkaada bangiga. Mushaarka waxaa kaash ahaan loo bixin karaa oo kaliya haddii wax kale oo suurtagali kara aysan jirin. Sidan waxaa la sameeyaa tusaale ahaan, marka aadan laheyn akoon bangi.
Haddii mushaarka gacanta laga siiyo, waa in aad bixinta mushaarka ka siisaa shaqo-bixiyahaada caddeyn saxiixan. Sidan waxaa lagu caddeyn karaa in mushaarka si dhab ah laguu siiyay.
Xiriirkaygi shaqo ee ku meel gaarka ahaa waa dhamaatay, laakiin la ima siinin mushaarkaygi ugu dambeeyay. Maxey tahay in aan sameeyo?
Weydii shaqo-bixiyaha sababta uu mushaarku u soo daahay. Ka dalbo shaqo-bixiyaha in uu mushaarka bixiyo. Qoraal ahaan dalabka ugu gudbi.
Haddii aad xubin ka tahay iskaashato xirfadeed, waxaad caawimaad weydiisan kartaa iskaashatadaada. Haddii aadan ka tirsaneyn iskaashato xirfadeed, la xiriir tusaale ahaan hay’adda badbaadada shaqaalaha.
Waxaan joojiyay shaqadi aan ka hayay booskaygi hore ee shaqada, laakiin ma helin shahaadada shaqada. Sideen ku helayaa shahaadada shaqada?
Shaqo-bixiyaha loogama baahna in uu iskiis kuu siiyo shahaadada shaqada. Haddii aad dooneyso shahaado shaqo, codso. Shahaadada waa in laguugu soo diraa sida ugu macquulsan uguna dhakhsaha badan.
Haddii aad codsatay shahaadada shaqada balse aadan helin, la xiriir hay’adda badbaadada shaqada. Faahfaahin dheeraad ka sii aqri bogga InfoFinlandi Shahaado shaqo.
Waxaan dareensanahay in booska shaqada laygula dhaqo si aan munaasib aheyn. Maxaan sameyn karaa?
Shaqaalaha oo dhan waa in loola dhaqmaa sinnaan iyo si isku qiimo ah. Sida uu sharcigu qabo qofna laguma takoori karo tusaale ahaan sababaha soo socda:
nooca xiriirka shaqo
asalka laga soo jeedo
diinta la aaminsan yahay
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinlandi Takooridda iyo midab-takoorka.
Takooridda waxaa dheer oo goobaha shaqada lagu arki karaa hab-dhaqanno kale oo aan munaasib aheyn, sida dhibista ama qashqashaad galmeed.
Marka hore arrinta kala hadal madaxdaada. Haddii aadan isaga caawimaad ka helin, la xiriir wakiilka badbaadada ee goobta shaqada ama qofka loo wakiishay arrimahaas. Haddii arrintu ay ku xallismi weyso goobta shaqada, la xiriir hay’adda badbaadada shaqaalaha ama iskaashatadaada xirfadleyda.
Haddii uu madaxdaadu kuula macaamilo si aan munaasib aheyn, ogeysii hay’adda badbaadada shaqaalaha. Ogeysiiska waxaad sameyn karto adigoo magacaada sheegaya ama adigoo magacaada qarinaya.
Waxaa aniga la igu qasbay shaqo aan mushaar la iga siin. Rabshad ayuu sidoo kale iigu hanjabayaa shaqo-bixiyaheygu. Xageen caawimaad ka helayaa?
Waxaad xaq u leedahay in aad hesho caawimaad iyo badbaado. Sida uu sharciga Finland qabo, shaqaalaha waa in si fiican loola macaamilaa mushaarna la siiyaa. Ka ganacsiga dadku Finland waa ka dembi. Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinlandi Ka ganacsiga dadka iyo ku shaqaysiga qasabka ah. Macluumaadka xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha ee Finland waxaad ka heleysaa bogagga InfoFinlandi Xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha.